Fitsaram-bahoaka mahatsiravina: dahalo enin-dahy maty notontaina vato malao | NewsMada
Natao ihany izay hoe tetika hiadiana amin’ny fanafoanana azy fa toa tsy mety foana ny fitsaram-bahoaka. Vao mainka aza mampihoronkoditra ny fisehony. Dahalo enin-dahy no niampatrampatra, maty notontain’ny fokonolona tamin’ny vato malao, tao amin’ny kaominina Tsarabaria, distrikan’i Vohémar.
Nampihoronkoditra! Nihosin-dra indray tao amin’ny distrikan’i Vohémar, nandritra ity fitsaram-bahoaka mahatsiravina tao Ampanefena, Vohémar, omaly maraina, ity. Raha ny tatitra nampitain’ny zandary, ny alin’ny 18 aogositra 2019 tokony ho tamin’ny 1 ora sy 10 mn, nahare antso ny kaomandin’ny tobim-paritra ao Ampanefena fa misy andian-dahalo miisa valo manafika tokantrano ao Beranofary, kaominina ambanivohitr’i Tsarabia, distrikan’i Vohémar. Voaroban ’ireo dahalo nandritra ny fanafihana ny lavanila milanja 150 kg eo ho eo. Nanao ny fanenjehana ny fokonolona ary efa nanao fahirano ny tanàna ihany koa. Ny kaomandin’ny tobim-paritra ao Ampanefena rahateo vao nahare izany, nandefa haingana zandary. Voalaza fa lalana adiny efatra an-tongotra ny elanelana misy an’Ampanefena ka hatreo Beranofary. Efa nanao tsara ambina ny tanàna sy ny lalana andalovan’ireo dahalo anefa ny fokonolona ao an-toerana ka tratran’ny fitsaram-bahoaka ny enina amin’ireto dahalo ireto. Samy nanao izay ho afany nanala ny hatezerany tamin’ireo dahalo ny fokonolona ka notontain’izy ireo tamin’ny vato malao sy vely kibay ireo malaso ary maty tsy tra-drano ny enina.
Tratra ny basy poleta roa sy lavanila 90 kg…
Tratran’ny zandary tamin’ireo dahalo ny basy poleta roa niaraka tamin’ny lavanila milanja 90 kg eo ho eo miaraka amin’ny odigasy. Nandray fepetra avy hatrany kaomandin’ny vondron-tobim-pileovana ao Sava nanao ny fanentanana ny olona tsy hanao fitsaram-bahoaka fa hanolotra ireo olon-dratsy eo am-pelatanan’ny mpitandro filaminana ary hametraka hatrany ny fitokisana amin’ny mpitandro filaminana. Mitohy ihany koa ny fikarohana ny naman’ireo dahalo tafaporitsaka. Ny filoha Rajoelina ihany koa, efa nanamafy ny tsy tokony hanaovana fitsaram-bahoaka fa hatolotra ny mpitandro filaminana ireny olona tratra ireny. Miaina ao anatin’ny fitaintainana sy ny horohoro hatrany koa anefa ny ankamaroan’ireo olona any ambanivohitra satria tsy mitsitsy rahateo koa ireo dahalo rehefa manafika. Misy aza mamoy ny ainy tsy fidiny ireo voatafika ka mahatonga ireo olona sasany tsy mamela ireo dahalo fa mitondra faisana avy hatrany izay tratran’izy ireo.